आईपीएलमा सन्दीपको पारिश्रमिक बढेन ! | Hamro Khelkud
आईपीएलमा सन्दीपको पारिश्रमिक बढेन !
बिहीबार, पौष २६, २०७५
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १२ औं संकरण आगामी मार्च २३ देखी भारतका विभिन्न सहरमा सुरु हुँदैछ । यसका लागि सहभागी सबै टोलीले खेलाडी अनुबन्ध,रिटेन र रिलिज गरिसकेका छन् । एक टिममा २५ भन्दा बढि खेलाडी राख्न पाइदैन । प्लेइङ ११ मा ४ भन्दा बढि विदेशी खेलाडी पनि खेलाउन पाइदैन ।
आईपीएलको अक्सन डिसेम्बर १८ मा जयपुरमा समापन भइसकेको छ । जस्मा ४० भारतीय र २० विदेशी खेलाडी विक्री भए । नेपालका युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई उनको फ्रेन्चाइज दिल्ली क्यापिटल्सले रिटेन गरेको कारण उनको नाम अक्सनमा थिएन ।
पछिल्लो एक वर्ष विश्वभरका ठूला लिगमा अप्रत्याशित सफलता हात पार्दै आएका सन्दीप अक्सनमा भएको भए करोडौं मुल्य लाग्ने उच्च सम्भावना थियो । तर पछिल्लो अक्सनमा २० लाख भारुमा विक्री भएका सन्दीप र दिल्लीबीच तीन वर्षे सम्झौता रहेको थियो । त्यसैले सन्दीपले दिल्लीले चाहेको खण्डमा अर्को संस्करणपनि यसै फ्रेन्चाइजबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली क्रिकेट टोलीका टेक्निकल म्यानेजर तथा सन्दीपको व्यवस्थापन हेर्दै आएका रमन शिवाकोटीले यस सिजनको आईपीएलमा सन्दीपले सोहि मुल्यमा खेल्ने हाम्रो खेलकुदलाई जानकारी दिए । शिवाकोटीले आईपीएल सुरु हुन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा दिल्लीले अहिलेसम्म कुनै रकम नबढाएको प्रष्ट पारे ।
सन्दीपले दिल्लीसँग तीन वर्षे सम्झौता गरेको भएपनि पछिल्लो एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय फेन्चाइज लिगमा सानदार प्रर्दशन गर्दै विश्व क्रिकेटमा तहल्का पिटीरहेका कारण केहि पारिश्रमिक बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
तीन वर्षे सम्झौताका कारण सन्दीप यो वर्ष मात्र होइन सन्दीप अर्को वर्ष पनि सोहि रकममा दिल्लीबाटै खेल्नु पर्ने हुन्छ । जसको कारण सन्दीप केहि मर्कामा परेका छन् । गत सिजनमा दिल्लीबाट अन्तिम ३ खेल खेल्दै ५ विकेट लिएका सन्दीपले त्यसयता फर्केर हेर्नुपरेको छैन । उनले लगभग सबै ठूला लिग खेल्दै आफ्नो स्तर देखाएका छन् ।
अन्य अन्तराष्ट्रिय लिगमा सन्दीपको कमाई कति ?
पछिल्लो एक वर्षमा सन्दीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिग तथा राष्ट्रिय खेल खेल्न भ्याई नभ्याई छ । सन्दीपको व्यवस्थापन पक्षलाई नै उनको तालिका मिलाउन धौ=धौ परिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमै क्रिकेटबाटै करोडपति बनेका सन्दीपले आईपीएलपछि यी प्रतियोगिता खेल्दै सोहीअनुसार कमाएका पनि छन् :
ग्लोबल टी-२० क्यानडा : ४३ लाख २० हजार (४० हजार अमेरिकीडलर)
क्यारेवियन प्रिमियर लिग : ५ लाख ४० हजार (५ हजार अमेरिकी डलर)
अफगानिस्तान प्रिमियर लिग : १७ लाख २५ हजार (१५ हजार अमेरिकी डलर)
टी–१० लिग : झन्डै ३५ लाख (३० हजार अमेरिकी डलर)
बिग ब्यास : ६० हजार अष्ट्रेलियन डलर
बंगलादेश प्रिमियर लिग : आधिकारीक रुपमा खुलाईएको छैन
पाकिस्तान सुपर लिग : ५० देखी ७० हजार अमेरिकी डलर (खेल्न बाँकी)
सन्दीपले पछिल्लो एक वर्षमा झन्डै २ करोड रुपैयाँ फ्रेन्चाइज लिगहरु खेलेर कमाएका छन् । पहिलो वर्षमा उनले आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै बलियो प्रदर्शन गरेका कारण उनको आउने दिनमा मूल्य अझै बढ्ने पक्का छ । अन्य लिगमा उनको भाउ बढेर जाँदा विश्वकै उत्कृष्ट मानिने इन्डियन प्रिमियर लिगमा भने उनले अझै दुई सिजन २० लाख भारुमा नै खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।